किटाणू को भण्डार हो नङ - साइप्रस नेपाल डट कम - अनलाइन म्यागजिन
जान्नै पर्ने कुरा साइप्रस न्युज स्वास्थ्य
किटाणू को भण्डार हो नङ
Posted By: NewsRoom0Comment हेल्थ
किन टोक्नु हुँदैन नङ ?
बिबिसी– भनिन्छ हात सफा भए किटाणू फैलिँदैनन्। खानेकुरा बेच्नेहरूले अझ बढी हात सफा राख्नुपर्छ। सामान्यतया स्वस्थ रहन चिकित्सक देखि घरपरिवारका ठूलाबडाले हात सफा राख्ने सल्लाह दिन्छन्। सबै भन्छन्, ‘हात सफा राख। दिसा–पिसाब गरेपछि साबुनले हात धोऊ, खाना खानुअघि हात धोऊ।’
तर, यथार्थमा हुन्छ के भने हामीले जतिसुकै प्रयास गरे पनि हातबाट ब्याक्टेरिया÷कीटाणू पूर्णतया समाप्त हुँदैनन् वा भनौँ हाम्रो हात किटाणू मुक्त हुँदैन। त्यसैले बिरामीको जाँच वा उपचार गर्दा चिकित्सक र नर्सहरू पन्जा लगाउँछन्।
करिब सय वर्षअघि चिकित्सकले के पाए भने, बारम्बार हात धुँदा पनि हात पूर्ण रुपमा किटाणू मुक्त हुँदैन। तर, यसको कारण पत्ता लगाउन भने करिब ७० वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो।
सन् १९७० तिर आएर मात्र हात पूर्णतया किटाणू मुक्त नहुने कारण पत्ता लाग्यो। वैज्ञानिकहरूले परीक्षणबाट के पत्ता लगाए भने हातका औंलाको टुप्पो सफा भए मात्र किटाणू फैलन घट्छ। हाम्रो नङमुनिको ठाउँमा यति धेरै किटाणू हुन्छन् कि यसलाई किटाणू को घर भने हुन्छ।
यी रिसर्च बाट के प्रस्ट हुन्छ भने स्वस्थ रहन लामो नङ नपाल्नु र सफा राख्नु अत्यन्त आवश्यक छ। यसो गरे हात पूर्णतया किटाणू मुक्त नभए पनि निकै न्यून हुन्छ। भर्खर पालिस लगाएको नङमुनि थोरै किटाणू हुन्छन्। तर चार–पाँच दिन वा त्यसभन्दा अघि पालिस लगाएको नङमुनि भने किटाणू को संख्यामा वृद्धि भइहाल्छ।
बर्सेनि विश्वभर करिब ३० लाख मानिसको मृत्यु डाइरियाबाट हुने गरेको छ। सरसफाइ विज्ञहरूका अनुसार हात राम्ररी धुने हो भने तीमध्ये १० लाखको जीवन बचाउन सकिन्छ। र, हामीले आफ्ना नङ नपाल्ने र हातगोडा सफा राखे अझै धेरै जीवन बचाउन सकिन्छ।
धेरै मानिसको नङ टोक्ने बानी हुन्छ। नङ किटाणू को भण्डार भन्ने थाहा पाइसकेपछि अझै पनि टोक्नु हुन्छ?
24/12/2020 newsdesk 0
25/08/2021 newsdesk 0